GI, GL ဆိုသည်မှာ . . . – Healthy Life Journal
GI, GL ဆိုသည်မှာ . . .
မေး. အစားအသောက်အညွှန်းတွေမှာ GI၊ GL ဆိုပြီး ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာတွေကို ဆိုလိုပါသလဲ။
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. GI ရဲ့အရှည်က Glycemic Index ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က အစားအသောက်တွေ စားလိုက်တဲ့အခါမှာ သွေးထဲမှာ ဂလူးကို့စ်ပမာဏ ဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ Low GI လို့ ပြောလိုက်ရင် ဆီးချိုရောဂါသည်တွေအတွက် အများကြီးစားသောက်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ GI မြင့်တဲ့ အစာတွေကတော့ ထမင်း၊ ကောက်ညင်း၊ ဆီထမင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ GI အလယ်အလတ်အစာတွေက ဖရဲသီး၊ နာနတ်သီးတို့ဖြစ်ပြီး GI နည်းတဲ့ အစာတွေက နို့၊ သင်္ဘောသီး စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
GL (Glycemic Load) ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ဘယ်လောက်စားသလဲဆိုတဲ့ ပမာဏကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ GI ကများတယ်၊ ဥပမာ ဖရဲသီးလိုမျိုး . . ဒါပေမဲ့ ဖရဲသီးကို တစ်စိတ်ပဲစားမယ်ဆိုရင် GL က သိပ်မများတော့ဘူး။ ဘယ်လောက်အစာ စားသလဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး GL က ကွဲပြားသွားပါတယ်။ GI ကလည်း နည်းတယ်၊ GL ကလည်း နည်းတယ်ဆိုရင် အဲဒီအစာကို စားလို့ရပါပြီ။ အဓိကအားဖြင့်တော့ GI ကိုပဲကြည့်ပြီး နည်းတာကို ရွေးချယ်စားသင့်ပါတယ်။
Related Items:Glycemic Index, Glycemic Load, Nutrition